Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda JOKA oo Shirrar ku Qabtay Magaalooyinka Pretoria iyo Uitenhage
Jaaliyadda JOKA oo Shirrar ku Qabtay Magaalooyinka Pretoria iyo Uitenhage
Posted by ONA Admin	/ November 29, 2014
Waxaa lagu qabtay magaalada Pretoria ee Caasimada dalka Koonfur Africa iyo magaalada Uitenhage ee Xaruntii hore ee Jaaliyada Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika Shirar si fiican loosoo qaabeeyay oo ay kasoo qayb galeen xubnaha Jaaliyada ee ku nool deegaamadaas.
Shirarkan oo ay ujadeeyinkoodu ahayeen sidii loo sii dardar galin laha arimaha Jaaliyadda Iyo doorka ay ku leedahay Halganka gobonimo doon ka ah ee ay JWXO hogaaminayso ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mida Xubnaha Jaaliyadda Ogadeniya ee magaalada Pretoria, magaalda Port Elizabeth iyo nawaaxigeeda.
Shirarkan ayaa waxaa ka hadlay masuuliyiin kamid ah Golaha dhexe ee JWXO, masuuliyiinta Jaaliyadda, aqoonyahano, Haween, Odayaal Iyo Marti Sharaf kale oo kasocotay qaarada yurub oo kaqayb qaadatay shirkii magaalada Pretoria.
Shirka Xarunta Jaaliyada ee Magaalada Pretoria ayaa waxaa lagu doortay Xoghayaha Ururka Midawga Dhalinyarada Iyo Ardayda Ogadeniya (OYSU) ee Gobolka Gauteng Bashir Axmed (Bashiir Ogadenia).
Shirarkan oo ugu dabeyn la isla qaatay qodobo wax ku ool ah ayaa waxaa ka soo baxay go’aamo lagu taamo oo ay gudida Jaaliyadu tilmaameen inay wax ku soo kordhin doonto wax qabadka Jaaliyadda.
Jaaliyadda Ogadeniya ee Koonfur Africa ayaa ka mida Jaaliyaddaha Ogadeniya kuwooda ugu xoogan dhanka Abaabulka bulshada.